Isahluko 87 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Kufanele nisheshise isivinini futhi nenze engifuna ukukwenza. Lokhu kuyinhloso Yami engiyilangazelele kini. Kungenzeka yini ukuthi ngalesi sikhathi niyobe ningakawuqondi umqondo wamazwi Ami? Kungenzeka yini ukuthi anikayazi inhloso Yami? Ngikhulume ngokucace ngokwengeziwe, futhi ngasho okuningi ngokwengeziwe, kodwa ingabe anikenzi mzamo wokuzama ukuqonda umqondo yamazwi Ami? Sathane, ungacabangi ukuthi ungabhidliza uhlelo Lwami! Labo abasebenzela uSathane, okungukuthi, inzalo kaSathane (lokhu kubhekise kulabo abaphethwe nguSathane. Labo abaphethwe nguSathane ngalokhu nakanjani banokuphila kukaSathane, ngakho futhi kuthiwa bayinzalo kaSathane), inxusa umusa ezinyaweni Zami, ikhala futhi igedla amazinyo, kodwa ngeke ngenze into enobuwula obunjalo! Ngingamxolela uSathane? Ngingaletha insindiso kuSathane? Akunakwenzeka! Ngenza engikushoyo futhi angizisoli ngesengikwenzile!
Noma yini engiyikhulumayo iyenzeka, akunjalo? Kodwa nisahlala ningangethembi, ningabaza amazwi Ami, futhi nicabanga ukuthi ngincokola Nani. Lokhu kuyahlekisa ngempela. NginguNkulunkulu uqobo Lwakhe! Niyaqonda? NginguNkulunkulu uqobo Lwakhe! Uma ngingenakuhlakanipha futhi ngingenamandla, ngingenza noma ngisho ngokuthanda kwami nje? Kodwa namanje aningethembi. Ngigcizelele ngokuphindaphinda kini, futhi nginitshelile ngokuphindaphinda. Kungani iningi lenu lingakholwa? Kungani nisenokungabaza? Kungani nibambelela ngokungadedeli emiqondweni yenu? Ingabe ingakusindisa? Ngenza engikushoyo. Nginitshele izikhathi eziningi: Thathani amazwi Ami njengayiqiniso futhi ningangabazi. Ingabe seniwathathe ngokuwethemba amazwi Ami? Ngokwakho ngeke wenze lutho, kodwa awukwazi ukukholwa kwengikwenzayo. Kungathiwani ngomuntu onjalo? Uma ngingagwegwesi, kusengathi angizange nginidale, okusho ukuthi, awufanelekile kukho konke ukuba ngumenzi womsebenzi Wami. Wonke umuntu kufanele akholwe ngamazwi Ami! Bonke kufanele bedlule esivivinyweni—ngeke ngivumele muntu aphunyuke edlule. Ngempela, lokhu akufaki labo abakholwayo. Abantu abakholwa ngamazwi Ami nakanjani bayokwamukela isibusiso Sami, esiyonikezwa wena futhi sigcwaliswe kuwe ngokuhambelana nalokho okukholwayo. Madodana Ami angamazibulo! Manje, ngiqala ukuninika zonke izibusiso Zami. Nizoqala ukulahla zonke izibopho zenyama ezenyanyekayo kancane kancane: umshado, umndeni, ukudla, ukugqoka, ukulala, zonke izinhlekelele zemvelo (umoya, ilanga, imvula, iziphepho ezilumayo, usizi lokukhithika kweqhwa nazo zonke ezinye izinto enizizondayo). Niyohamba olwandle, ezweni, nasemoyeni ngaphandle kokuvinjwa yindawo, isikhathi, noma ukwakheka komhlaba, nithokoza ngezinhliziyo ekusingatheni Kwami okunothando, niphethe konke ngaphansi kokunakekela Kwami okunothando.
Ngubani ongaziqhenyi ngamadodana angamazibulo engiwaphelelisile? Ngubani ongeke adumise igama Lami ngenxa yamadodana Ami angamazibulo? Kungani manje ngifuna ukunikhombisa izimfihlakalo eziningi kangaka? Kungani kungabanga sesikhathini esedlule, kodwa namuhla? Lokhu ngokwakho nakho kuyimfihlakalo, uyazi? Kungani ngingashongo esikhathini esedlule ukuthi iChina iyisizwe engisiqalekisile? Kungani ngingabambulanga labo abangenzela umsebenzi? Namuhla nginitshela lokhu futhi: Namuhla, ngokombono Wami, konke kufeziwe—ngikusho lokhu ngikuqondise kumadodana Ami angamazibulo. (Ngoba namuhla amadodana Ami angamazibulo abuse kanye Nami, hhayi kuphela ethatha isimo, kodwa ngokubusa ngempela kanye Nami. Manje yilowo okusebenza kuye uMoya oNgcwele kuphela obusa ngempela Nami, futhi lokhu kwambulwa manje, hhayi izolo, noma kusasa.) Namuhla ngambula zonke izimfihlakalo Zami ebuntwini obejwayelekile ngoba labo bantu engifuna ukubambula bambuliwe, futhi lokhu kungukuhlakanipha Kwami. Umsebenzi wami usuqhubekele kulesi sinyathelo: Okungukuthi, kuleli qophelo kufanele ngenze uhlelo lwezinqumo zokuphatha engizinqumele leli qophelo. Ngakho, ngibeka iziqinisekiso ezifanele phezu kwamadodana Ami angamazibulo, amadodana Ami, abantu, nabenzi bomsebenzi, ngoba nginegunya futhi ngiyokwahlulela futhi ngiyobusa ngenduku yensimbi. Ngubani olokotha ukungangenzeli umsebenzi ngokulalela? Ngubani olokotha akhononde Kini? Ngubani olokotha ukuthi angiyena uNkulunkulu wokulunga? Ngiyazi, imvelo yenu yobudeveli kade yambulwa phambi Kwami: Kulowo engimenzela ukulunga, ninomona futhi niyamzonda. Lokhu kuyimvelo kaSathane ngokuphelele! Ngilungile emadodaneni Ami—uyalokotha uthi angilungile? Ngingakuxosha ngokuphelele. Ngenhlanhla ungenzela umsebenzi futhi manje akusona isikhathi; kungenjalo, bengiyokuxosha!
Luhlobo lukaSathane! Yekani ukuba yizilwane! Ningabe nisakhuluma! Ningabe nisenza! Umsebenzi Wami usuqalile ukwenziwa kumadodana nakubantu Bami abakhethiwe, futhi ususabalalela emazweni onke, onke amahlelo, zonke izinkolo, nayo yonke imikhakha yempilo engaphandle kwaseChina. Kungani labo abangenzela umsebenzi behlala bevimbekile ngokomoya? Kungani bengakaze baziqonde izindaba zokomoya? Kungani njalo uMoya Wami ungasebenzi kulaba bantu? Ngokwejwayelekile, angikwazi nhlobo ukuchitha amandla amaningi kulabo engingabanqumele ngaphambili noma engingabakhethile. Konke ukuhlupheka Kwami kwangaphambili, konke ukunakekela nomzamo Wami onesineke bekungenxa yamadodana Ami angamazibulo nengxenye encane yamadodana nabantu, futhi ngaphezu kwalokho bekungenxa yokuphethwa kahle komsebenzi Wami wesikhathi esilandelayo, ukuze intando Yami ingavinjwa. Ngoba nginguNkulunkulu ohlakaniphile uqobo Lwakhe, ngihlele ngokufanele zonke izinyathelo. Angenzi mzamo wokugcina noma yimuphi umuntu (lokhu kuqondiswe kulabo abangakhethwanga noma abangamiswanga ngaphambili), futhi angishayi ngiwise noma muphi umuntu (lokhu kuqondiswe kwengibakhethile nengibanqumele ngaphambili): Lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha, okungekho muntu ongasiguqula! Kulabo engibazondayo, nginesihluku; kulabo engibathandayo, ngiyababheka futhi ngibavikele. Ngalokhu, ngenza engikushoyo (engibakhethayo, bayakhethwa; engibanqumela ngaphambili, banqunyelwa ngaphambili; lezi yizindaba Zami engizilungiselele ngaphambi kokudalwa).
Ngubani ongaguqula inhliziyo Yami? Ngaphandle Kwami ngenza ngokuhambisana nezinhlelo engizenza njengoba ngifisa, ngubani olokotha enze ngokugagamela futhi angalaleli umyalelo Wami? Lezi yizinqumo Zami zokuphatha, futhi ngubani oyolokotha asuse nesisodwa sazo Kimi? Konke kufanele kube ngaphansi kokuyalela Kwami. Abanye abantu bathi, lowaya muntu usehlupheke kakhulu, futhi wethembekile futhi uyicabangela ngokugcwele inhliziyo Yami, kodwa kungani engakhethwanga? Lokhu nakho kuyisinqumo Sami sokuphatha. Uma ngithi umuntu ufuna inhliziyo Yami, khona-ke ngithi lowo muntu ufuna inhliziyo Yami futhi uyilowo engimthandayo; uma ngithi umuntu uyingane kaSathane, khona-ke lowo muntu uyilowo engimzondayo. Ungazincengeli ukuthandwa muntu! Niyabona ngempela ngaphakathi kuye? Konke lokhu kunqunywa Yimi. Indodana ihlala iyindodana, noSathane uhlala ewuSathane, okusho ukuthi, imvelo yomuntu ayiguquki. Uma ngingabenzi baguquke, bonke bayolandela uhlobo lwabo futhi abakwazi neze ukuguquka!
Ngambula izimfihlakalo Zami kini ngenkathi umsebenzi wami uqhubeka. Namuhla, ukuthi umsebenzi Wami uqhubekele kusiphi isinyathelo, niyazi ngempela? Niyokulandela ngempela ukuhola koMoya Wami ukuze nenze lokhu engikwenzayo nokusho lokho engikushoyo? Kungani ngithi iChina yisizwe engisiqalekisile? Okokuqala, ngadala abantu baseChina banamuhla emfanelisweni Wami. Babengenamoya, futhi ngasekuqaleni bakhohlakaliswa nguSathane futhi babengeke bakwazi ukusindiswa. Ngakho ngabathukuthelela laba bantu ngase ngibaqalekisa. Ngibazonda kakhulu laba bantu, futhi ngiyathukuthela lapho kukhulunywa ngabo ngoba bangabantwana bakadrako omkhulu obomvu. Kulokhu umuntu ucabanga ngesikhathi lapho amazwe omhlaba ethumbe iChina. Kusenjalo namuhla, futhi konke kade kuyisiqalekio Sami—ukwahlulela Kwami okunamandla kakhulu udrako omkhulu obomvu. Ekugcineni, ngenza olunye uhlobo lwabantu, phakathi kwalo enganqumela ngaphambili amadodana Ami angamazibulo, amadodana, abantu, nalabo abangenzela umsebenzi, ngakho engikwenzayo namuhla ngakulungiselela kudala ukukwenza. Kungani labo abasemandleni eChina bephindaphinda benishushisa futhi benicindezela? Kungoba udrako omkhulu obomvu akajabuli ngesiqalekiso Sami futhi umelana Nami. Kodwa kungaphansi kwalolu hlobo kanye lokushushiswa nokwesabisa engiphelelisa kulo amadodana Ami angamazibulo ukuze ngenze ukuhlasela okuqinile okuphikisa udrako omkhulu obomvu nezingane zakhe. Emva kwalokho ngiyobaqondisa. Emva kokulalela amazwi Ami, niyakuqonda ngempela ukubaluleka kokunivumela Kwami ukubusa Nami? Lapho ngithi udrako omkhulu obomvu uphonswe ngokuphelele phansi wafa, kuyisikhathi futhi lapho amadodana Ami angamazibulo ebusa Nami. Ukushushisa kukadrako omkhulu obomvu amadodana Ami angamazibulo kungenzela umsebenzi omningi, futhi lapho amadodana Ami esekhulile futhi ekwazi ukuphatha izindaba zendlu Yami, khona-ke izisebenzi ezimbi (abenzi bomsebenzi) ziyoxoshwa. Ngoba amadodana Ami angamazibulo ayobe kade ebusa Nami futhi ayobe egcwalise izinhloso zami, ngiyodudulela ngamunye ngamunye ngokulandelana, abenzi bomsebenzi echibini lomlilo nesibabuli: Noma kuthiwani, kufanele basuke! Ngibona ngokugcwele ukuthi abawuhlobo lukaSathane nabo bafuna ukuthokozela izibusiso Zami, futhi abafuni ukubuyela embusweni kaSathane, kodwa nginezinqumo Zami zokuphatha okufanele wonke umuntu aphile ngazo futhi okufanele zenziwe, futhi akekho oshiywa ngaphandle. Kamuva, ngiyonitshela izinqumo Zami zokuphatha ngokulandelana kwazo, ningaze none.
Okwedlule: Isahluko 86
Okulandelayo: Isahluko 88